စွဲလမ်းမှုအတွက် ဦး နှောက်ဆုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌လှုပ်ရှားမှု
တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 5: 79 ။
2014 ဇူလိုင်9အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2014.00079
က Nicholas ဒဗလျူ Gilpin1,*
မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှစွဲကြီးမားမှာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အကြီးအကျယ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးဆက်များနှင့်အတူလူသားများအတွက်ပြောင်းလဲနေသောနှင့်ဘက်စုံရောဂါဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၏မကြာသေးမီကဖြန့်ချိပဉ္စမထုတ်ဝေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-V ကို) ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (Sud) လို့ခေါ်တဲ့တစ်ခုတည်း syndrome ရောဂါသို့အလွဲသုံးစားမှု licit နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်ယခင်ကသီးခြားအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုခွဲခြားမှုပေါင်းစပ်။ ယခုအသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ယခင်စံ (DSM-IV), နှင့်ဆေးသမားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစံ၏နံပါတ်ပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးချင်းရဲ့အ Sud ၏ပြင်းထန်မှုခွဲခြားဖြင့်တရားစွဲဆိုထားပါသည်ဌာန၏သစ်ကိုအဖြေရှာတဲ့တံခါးနှင့်အတူအကြီးအကျယ်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းအဖြေရှာတဲ့စံပါဝင်သည်။ ပိုများသောအထူးသ, ပျော့ Sud နှစ်ခုမှသုံးလက္ခဏာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကိုလိုအပ်သည်, အလယ်အလတ် Sud လေးငါးခုမှရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကိုလိုအပ်သည်နှင့်ပြင်းထန်သော Sud ခြောက်လသို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့စေလိုအပ်သည်။ ရောဂါရှာဖွေစံဖို့တစ်ခုမှာထင်ရှားတဲ့များအပြင်တစ်ဦးပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒအဖြစ်ကျယ်ပြန့်သတ်မှတ်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး / အရက်သေစာသုံးစွဲဖို့တိုက်တွန်းနိုင်သည့်တဏှာဖြစ်ပါသည်။ နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းကွဲပြားခြားနားသောဇီဝအကျိုးဆက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော Co-ရောဂါအန္တရာယ်များရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကျင်းပေါင်းအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှဘုံဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူလက္ခဏာတွေတစ်ခုတည်း set ကိုအညီသတ်မှတ်နှင့်ကုသပေးလျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအမူအကျင့်လက္ခဏာများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မရှိခြင်းအတွက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေး, မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကန့်သတ်အတွက်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတို့ပါဝင်သည်နှင့်ယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်တွေကိုအားဖြင့်အစပျိုးပြန်သွားကြသည်မှအားနည်းချက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤရောဂါလက်ခဏာတစျခုစီတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောဒီဂရီလုပ်ပါတယ်ခံရနိုင်ပြီး, တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ Sud ၏နောက်ခံ neurobiology ရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်လူသားတွေအတွက်အလွန်အကျွံမူးယစ်နှင့်အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းမှုကိုနှိပ်ကွပ်ရည်ရွယ်ကုသမှုအတွက်အလားအလာသစ်ကိုပစ်မှတ်ဖော်ထုတ်ဘို့အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။
ဒီသုတေသနခေါင်းစဉ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်စုပေါင်းစွဲအတွက်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏အလှူငွေစူးစမ်းသောစွဲလမ်းလယ်ပြင်၌ရှိသောခေါင်းဆောင်များကပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပင်ကိုယ်မူလဆောင်းပါးများကိုစုစည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန် Sud ဖို့အကူးအပြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မရှိခြင်းအတွက်လှုံ့ဆျောမှု, အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ, nociception နှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးတို့ပါဝင်သည်ကြောင်းအမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များဖြန်ဖြေဘို့တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်း, ဦးနှောက်ဆားကစ်အတွက် neuroadaptations သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု (1) သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်နှစ်ဦးစလုံး hypothalamic (neuroendocrine) ၏ (2) စုဆောင်းမှုနှင့်အပို-hypothalamic ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏စူးရှသောအကြိုးသက်ရောက်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းအာရုံကြောဆားကစ်အတွက်အတွင်း-system ကိုပြောင်းလဲမှုများကိုအားပေးအားမြှောက်။
အမျိုးမျိုးသောဇီဝနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအနေနဲ့သုံးစွဲဖို့တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်၏ propensity မှကူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လင့်များသတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးဗီဇ profile များကိုနှင့်ကျင်းပေါင်း diagnoses အကြားပေါ်ထွက်လာနေကြသည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြဿနာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအရင်အဦးနေရာသို့မဟုတ်အတိုင်းလိုက်နာစေခြင်းငှါအခြားအစိတ်ရောဂါအခြေအနေများ (ဥပမာ, စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်, အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ, schizophrenia နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်) နဲ့အလွန်အမင်း Co-နေကြလို့ပဲဖြစ်တယ်။ အလွဲသုံးစားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဖြတ်ပြီး, မှီခိုဖို့အကူးအပြောင်းသတ်မှတ်သောအမူအကျင့်များနှင့် neurobiological ပြောင်းလဲမှုများထပ်နှင့် dissociable ရှုထောင့်ရှိပါတယ်။ တောင်မှအလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုတည်းမူးယစ်ဆေးအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောလူအမျိုးမျိုးကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစား; တစ်ခုတည်းတစ်ဦးချင်းအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကတော့သက်တမ်းနှင့်ရောဂါ၏သင်တန်းကိုဖြတ်ပြီးပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။ ပုံသညျလူသားတို့ကိုမကြာခဏတစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုထက် ပို. မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသုတေသနခေါင်းစဉ် pathophysiological ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းပါကကမကထပြုခဲ့တဲ့ရောဂါအဖြစ်စွဲဖော်ပြသောအသစ်အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက် (NIAAA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ဒေါက်တာဂျော့ခ်ျ Koob, Ph.D ဘွဲ့ကိုနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်, အတူစတင် ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်၏စုဆောင်းမှု (1) ။ ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များစုဆောင်းမှု [ဥပမာ corticotropin-releasing အချက် (CRF) နှင့် glucocorticoids] အလွန်အကျွံမူးယစ်နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမြှင့်တင်ဘို့အရေးပါကြောင်းကိုစိတ်ကူးပေါ်တည်ဆောက်အတိုင်းလိုက်နာသောဆောင်းပါးများကိုအများအပြား။ ဒီသုတေသနခေါင်းစဉ်၏ကျန်ရှိသောအလွဲသုံးစားမှုအမျိုးမျိုးမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစွဲလမ်း၏ neurobiology ပွလြော့ရည်ရွယ်အလုပ်ဖော်ပြရန်ကြောင့်ပင်ကိုယ်မူလနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးတစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပြီး, စွဲသုတေသနလယ်ပြင်၌အမျိုးမျိုးသောလက်ရှိ "ပူအကြောင်းအရာများ" (နဲ့အတူဆက်ဆံမှုကဒီ neurobiology ကြောင်း2-14).
ဒီသုတေသနခေါင်းစဉ်အတွက်ဆောင်းပါးများစွဲသုတေသနလယ်ပြင်၌လက်ရှိအလေးပေးအမျိုးမျိုးအချက်များကိုဖြေရှင်း။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောဧရိယာတစ်ဦးချင်းခြားနားချက်များ၏စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်: ကတဖြည်းဖြည်းတစ်ဦးချင်းစီအကြောင်း, တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောဘဝလမ်းခရီးနှင့် precipitating အချက်များအားဖြင့်အတူတူပင် phenotypic သို့မဟုတ်အဖြေရှာတဲ့အဆုံးမှတ်မှာရောက်လာစေခြင်းငှါ, တလွှားနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအတွင်းစွဲအားလုံးအတူတူပင်မဟုတ်လက်ခံခဲ့သည်နေပါသည် co-ရောဂါ (ဥပမာ, စွဲလမ်းနှင့်နာကျင်မှု) ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစုံပြနှင့်စွဲ၏ subpopulations (ဆိုလိုသည်မှာ pharmacogenetics) လိုက်. လျှင်ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကပိုထိရောက်စေခြင်းငှါ။ ဒါ့အပြင်ဒီဆောင်းပါးအစုံအတွက်ဖြေရှင်းတစ်ဦးချင်းစီ neurochemical စနစ်များကိုတစ်ခုထက် ပို. မူးယစ်ဆေးများသာအလွဲသုံးစားမှုဖြန်ဖြေဘို့, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းတစ်ဦးချင်းစီ (ဥပမာ၏မြင့်နှုန်းထားများအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုမူးယစ်ဆေးဝါးပူးတွဲအလွဲသုံးစားမှုဖြန်ဖြေဘို့အရေးပါဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအယူအဆဖြစ်ပါသည် အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် co-နေကြလို့ပဲဆေးလိပ်သောက်) ။ လက်ရှိတွင်စွဲသုတေသနလယ်ပြင်၌သိပ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအဓိကလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏နောက်ထပ်ဧရိယာဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်ထိတွေ့မှု၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနားလည်ရန် drive ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်စောစောပိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါး၏စတင်များနှင့်အရက်အသုံးပြုမှုနောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌ Sud နှင့်အခြားစိတ်ရောဂါအခြေအနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်တိုးပွါး, ထိုသို့နေဆဲဖို့အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်, ဖွံ့ဖြိုးဆဲသောကြောင့်ဤသည့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်မည်အကြောင်းလက်ခံသည် ထိုအရာဝတ္ထုများ၏ဆိုးကျိုးများ။
pre-လက်တွေ့သုတေသနတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအမျိုးမျိုးအသုံးချနှင့်လျှင်မြန်စွာမူးယစ်ဆေးစွဲ၏အခြေခံ neurobiology စူးစမ်းဖို့နည်းပညာဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုတိုးတက်။ ဒီသုတေသနခေါင်းစဉ်အတွက်အများအပြားဆောင်းပါးများကိုစွဲ၏ (E-စီးကရက်နှင့်ဒုတိယ-လက်မီးခိုးများအတွက်မော်ဒယ်အဖြစ်ဥပမာနီကိုတင်းငွေ့) အသုံးများသောမျိုးရိုးဗီဇမော်ဒယ်များ (အမြင့်ဆုံးအရက် preference ကိုများအတွက်ဥပမာရွေးချယ်မွေးမြူရေးတိရိစ္ဆာန်များ) နှင့်ပိုပြီးမကြာသေးမီကတီထွင်ထိတွေ့မော်ဒယ်များကိုဖော်ပြရန်။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များသစ်ကိုဥပမာ, တစ်ခုတည်းသောဦးနှောက်ဒေသများတွင်သီးခြား၏ချဉ်းကပ်မှုလျင်မြန်စွာ circuitry ချဉ်းကပ်မှုဖြင့်အစားထိုးလျက်ရှိသည် ပို. ပို. ခေတ်မီနည်းလမ်းတွေထဲမှာစွဲ၏ neurobiology ဆနျးစစျဖို့နည်းပညာများ (ဥပမာ optogenetics နှင့် chemogenetics), နှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် cranial ပေးပို့နဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ် "ညစ်ပတ်" အဲဒီ receptor နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဖြေရှင်းနည်းများ binding နှင့်ပျံ့နှံ့ profile များကိုအလွန်အမင်း Control optical ဆွနဲ့ဒီဇိုင်နာမူးယစ်ဆေးနည်းစနစ်ဖြင့်အစားထိုးလျက်ရှိသည်။ စုပေါင်းဒီမှာတင်ဆက်ဆောင်းပါးများစွဲသုတေသနလယ်ပြင်၌လက်ရှိသီအိုရီများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲရှုခင်းတစ်ခုလျှပ်တစ်ပြက်သည်။
1 ။ Koob gf ။ စွဲနေတဲ့ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု surfeit ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 72.10.3389 / fpsyt.2013.00072 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
2 ။ Hendrickson LM, Guildford MJ, Tapper AR ။ အာရုံခံနီကိုတင်း acetylcholine receptors: နီကိုတင်းနှင့်အရက်မှီခို၏ဘုံမော်လီကျူးအလွှာဟာ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 29.10.3389 / fpsyt.2013.00029 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
3 ။ တောရက်စ် OV, တပါးအမျိုးသားတို့သည် LG က, Natividad LA က, Carcoba LM, O'Dell LE ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျးအမူအကျင့်, နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မော်လီကျူးညွှန်းကိန်းနီကိုတင်းဆုတ်ခွာကြုံနေရအထီးကြွက်နှိုင်းယှဉ်အမျိုးသမီးအတွက်တိုးမြှင့်နေကြသည်။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 38.10.3389 / fpsyt.2013.00038 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
4 ။ Lewis က CR, Staudinger K ကို Scheck L ကို, သံလွင် MF ။ မိခင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ခွဲခြာ, မျိုးသုဉ်း, reinstatement, နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် MeCP2 immunoreactivity ၏ဆိုးကျိုးများ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 55.10.3389 / fpsyt.2013.00055 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
5 ။ Mandyam CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ အရက်မှီခိုရာမှအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းထစ်အငေါ့ hippocampal neurogenesis ထိန်းညှိအတွက် hippocampus နှင့် amygdala တို့အကြားအဆိုပါဆက်စပ်မှုတွေ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 61.10.3389 / fpsyt.2013.00061 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
6 ။ Hutton-Bedbrook K ကို McNally မိသားစုဆရာဝန်။ မူးယစ်ဆေးရှာဖို့ relapse တားဆီးအတွက်ပြန်လည်ရယူခြင်း-မျိုးသုဉ်းလုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏ကတိတော်များနှင့်ထောငျခြော။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 14.10.3389 / fpsyt.2013.00014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
7 ။ Silberman Y ကို, Winder DG ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်၏လမ်းဆုံမှာ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲမှာအချက်ပြလွှတ်အချက် corticotropin များအတွက်ထွန်းသစ်စအခန်းကဏ္ဍ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 42.10.3389 / fpsyt.2013.00042 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
8 ။ Cohen ကိုတစ်ဦး, နီကိုတင်း၏ထိတွေ့ခြင်းဂျော့ခ်ျ O. တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ: ဒုတိယ-လက်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ဆက်စပ်မှု, အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် compulsive ဆေးလိပ်သောက်။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 41.10.3389 / fpsyt.2013.00041 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
9 ။ Ayanwuyi LO, Carvajal က F, Lerma-Cabrera JM, Domi အီး, Björk K ကို Ubaldi M က, et al ။ အရက်သောက်သုံးအတွက် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor 1 မျိုးရိုးဗီဇအတွက်မျိုးဗီဇ polymorphic ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် Marchigian Sardinian အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များ၏အပြုအမူရှာကြံ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 23.10.3389 / fpsyt.2013.00023 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
10 ။ ဓာတ်ငွေ့ JT, Chandler LJ ။ မျိုးသုဉ်း၏ပလတ်စတစ်: inhibitory သင်ယူမှုမှတဆင့်စွဲကုသအတွက် prefrontal cortex ၏ပံ့ပိုးမှုများ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 46.10.3389 / fpsyt.2013.00046 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
11 ။ Obara ငါသူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် SP, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် AT, Lominac KD, Hu JH, Zhang က PW, et al ။ ဆုလာဘ်များနှင့်နာကျင်မှုအကြား Interface ကိုမှာ Homer ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 39.10.3389 / fpsyt.2013.00039 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
12 ။ Trifilieff P ကို, ကိုကင်းမှီခိုအတွက် dopamine ဂီယာတစ်ခုအလားအလာ modulator တွေကိုအဖြစ် striatum အတွက်အချက်ပြ Martinez ဃ Kappa-opioid အဲဒီ receptor ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 44.10.3389 / fpsyt.2013.00044 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
13 ။ Lisdahl KM, Gilbart ER, Wright NE, Shollenbarger အက်စ်နှောင့်နှေးဝံ့? ဆယ်ကျော်သက်အရက်နှင့်ဆေးခြောက်များ၏သက်ရောက်မှုသိမှတ်ခံစားမှု, ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအပေါ်စတင်ခြင်းကိုအသုံးပြုပါ။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 53.10.3389 / fpsyt.2013.00053 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
14 ။ Srinivasan S က, Shariff M က, Bartlett SE ။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲဖို့ခံနိုင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲထဲမှာ glucocorticoids ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 4: 68.10.3389 / fpsyt.2013.00068 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]